Trump oo diiday in uu argagixiso ku tilmaamo weerarkii Las Vegas - BBC News Somali
Trump oo diiday in uu argagixiso ku tilmaamo weerarkii Las Vegas
Image caption Donald Trump ayaa Stephen Paddock ku tilmaamay nin xanuunsan
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa la weeydiiyay in falkii uu geystey Stephen Paddock ku tilmaami lahaa 'mid argagixiso oo maxali ah', balse wuu diiday in uu sidaas sheego.
Trump wuxuu Paddock ku tilmaamay "nin xanuunsan", isaga oo sidoo kale balanqaaday in ay dib u eegis ku samayn doonaan xakamaynta hubka Maraykanka.
Paddock ayaa hub badan gatay ka hor inta uusan weerarka qaadan, qolkii uu ka deganaa Hoteel Mandaleya Bay, waxaa laga heley 23 qori iyo kumanaan rasaas ah.
Paddock ayaa wuxuu toogasho ku diley 59 qof, 500 kalana wuu dhaawacay kadib markii uu oodda uga qaaday rasaas ka dheceysay qori ah nooca darandooriga u dhaca.
Falkaas ayaa noqday dhacdadii ugu xumeyd oo dad intaa la'eg lagu laayo, taariikhda dhow ee Maraykanka.
Markii uu waagu dilaacay, midab dabahi ah ayuu yeeshay darbiga dhismaha Hotel Mandaleya, meel ku beegan halkii uu rasaasta kasoo hurgufey Paddock. Waxaa la arki karaa daaqado burburay.
Waddooyinka, xarkaha jaalaha ah ee booliiska ayaa wali ku xeendaaban halkii ay wax ka dhaceen, iyada oo leelarkii ka ifayay caweyskii caanka ahaa ee Las Vegas la baqtiyay.
Donald Trump ayaa weeraro argagixiso ku tilmaamay kuwo midkan ka qasaaro yar oo Maraykanka ka dhacay.
Waa kuma Stephen Paddock?
Lahaanshaha sawirka CBS NEWS
Image caption Stephen Paddock ayaa toogasho ku diley 59 qof, 500 kalana dhaawacay
Nin lagu magacaabo David Famiglietti oo leh bakhaar hubka lagu iibiyo oo magaciisu yahay New Frontier Armory ayaa BBC-da u sheegay in dukaankiisa uu hubka ka iibsaday Paddoc gu'gii sanadkan, wuxuuna sheegay in Paddock uu waafaqay dhammaan shuruudihii looga baahnaa qofka hubka iibsanaya oo ay ka mid tahay in qofka laga eego diiwaanka dambiileyaasha ee FBI-da.
Balse waxa uu intaas ku daray in qoriga uu isticmaalay laga yaabo in uu farsamo dheeraad ah ku daray , haddii kale aysan suurtogal ahaan lahayn in uu sidaas u shanqaro, qasaaraha intaas la'egna geysto mudada sidaas u gaaban.
Erick Paddock oo wiilasha ugu yar ayaa korey isaga oo u malaynaya in uu aabihiis dhintay, balse sanado ka hor markii uu tagay machad ciidammada cirka ayaa waxaa loo sheegay in aabihiis uu noolyahay, yahayna qof horey uga tirsanaan jiray ciidammada oo geesinimo lagu yaqiinay. Mar aan sii fogeyn ayuu dhintay Patrick Benjamin Paddock sida ay faafiyeen warbaahinta Maraykanka.